တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Qinghai ပြည်နယ်တွင် ၆.၂ ရှိ ငလျှင်လှုပ် | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Qinghai ပြည်နယ်တွင် ၆.၂ ရှိ ငလျှင်လှုပ်
တရုတ်နိုင်ငံ Qinghai ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း Da Qaidam အနီး (မန္တလေးမြို့မြောက်ဘက် မိုင် ၁၁ဝဝ ခန့်)တွင် အင်အား ရစ်ချတာစကေး ၆.၂ ရှိသည့် ငလျှင်တစ်ခု မြန်မာစံတော်ချိန် ယနေ့ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီ ၂၂ မိနစ် ၀၆ စက္ကန့်အချိန်တွင် လှုပ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။
ဆက်လက်၍ ၈နာရီ ၄၄ မိနစ် ၅၇ စက္ကန့်နှင့် ၈ နာရီ ၄၆ မိနစ် ဝ၇ စက္ကန့်တို့တွင် ရစ်ခ်ျတာစကေး ၅.၆ ရှိသည့် ငလျှင်များ ဆက်တိုက်လှုပ်သွားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
Friday, August 28, 2009 at 01:52:06 UTC
Friday, August 28, 2009 at 09:52:06 AM at epicenter
horizontal +/- 8.1 km (5.0 miles); depth fixed by location program
NST= 79, Nph= 79, Dmin=>999 km, Rmss=0.92 sec, Gp= 94°,
MAP 4.0 2009/08/28 02:42:29 37.569 95.733 10.0 NORTHERN QINGHAI, CHINA
MAP 5.6 2009/08/28 02:16:07 37.530 95.616 9.9 NORTHERN QINGHAI, CHINA
MAP 5.6 2009/08/28 02:14:57 37.654 95.719 11.6 NORTHERN QINGHAI, CHINA
MAP 6.2 2009/08/28 01:52:06 37.721 95.684 10.0 NORTHERN QINGHAI, CHINA
Posted in Quakes. 1 Comment »
One Response to “တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Qinghai ပြည်နယ်တွင် ၆.၂ ရှိ ငလျှင်လှုပ်”
A 6.4-magnitude earthquake struck the remote Qinghai Province in northwest China at 9:52 a.m. Friday, the China Earthquake Administration said.
No casualties have been reported, local government said.
« Taiwan confirms 543 dead, 117 missing after typhoon
Magnitude 6.8 – BANDA SEA »